Dowladda Soomaaliya Oo Soo Rogeysa Go’aano Adag Si Loo Xakameeyo Covid-19 - Awdinle Online
April 9, 2020 (Awdinle Online) –Xukuumadda Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in ay soo rogto go’aano adag oo horleh si looga hortago faafitaanka Coronavirus, sidda ay xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka.
Go’aanada oo la tashiyadii ugu dambeeyay ay ka leeyihiin madaxda waxaa qeyb ka noqon kara in gebi ahaanba la mamnuuco isu imaatinka.
Cabdirisaaq Yuusuf Axmed Jamaaludiin, xubin ka tirsan guddiga heer federaal ka hortagga cudurka, ayaa xoojiyey baahida loo qabo go’aano adag, inkastoo uu dadka ugu baaqay in walbahaar badan aysan muujin.
“Xitaa hadii ay noqoto in naf la badbaadiyo waxaa haboon in awood ciidan la adeegsado si loo dhaqan-geliyo go’aanada adag,” ayuu ku sheegay wareysi uu bixiyey.
Sidda laga soo xigtay Jamaaludiin, go’aanada xukuumadda kasoo bixi kara waxaa qeyb ka noqon kara in Salaada Jimcada soo aadan aanan lagu tukan jameecada, taas bedelkeedna la xiro gebi ahaanba Masaajida.
Isagoo hadalkiisa sii wata, wuxuu caddeeyay in xanuunka uu ku dhex-faafay gudaha magaalada Muqdisho isla markaana ay odrsayaan in
todobaadyadda soo aadan kiisas badan laga soo warin karo meelo kala duwan.
“Muqdisho waxey wajahi doontaa isbuucyo xanuun badan, dad badan buu soo ridan doonaa Carona, wasaarada Caafimaad shaqaalaheeda badankooda baaritaan baa la marsiiyey maadama laba naga mid ah laga helay, natiijadana waan arkeynaa,” ayuu tilmaamay Dr Cabdirisaaq.
Howlwadeenada la baarayo waxaa kamid ah isla Jamaaludiin maadaama uu kamid ahaa shaqsiyaadkii la shaqeeyay saraakiisha qaadey
caabuqa, balse wuxuu ka gaabsaday in ay wasiir Fowziya Abiikar Nuur kamid tahay.
“Annaga ma xamili karno in aan karan-tiilno dad badan, laakiin xalka ugu wanaagsan waa dadka in ay iyaga is-karan-tiilaan, ayna
xoojiyaan difaacooda oo ay cabaan biyo badan,” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay.
Kiisaska Coronavirus ee laga helay Muqdisho ayaa haatan maraya 12 kadib markii shalay lasoo wariyey afar kiis kale oo cusub.
In ka badan 50 qof oo iskood u tegay Wasaaradda markii ay iska shakiyeen ayaa natiijada la sugayaa.
Previous articleXisbiga Himilo Qaran oo Ku Guuleystay Dacwaddii ay Ka Gudbiyeen Hey’adda Duulista Soomaaliya
Next articleQAYLO DHAAN KA TIMID MID KA MID AH ISBITAALADA G/ BANAADIR